Andron’ny indostria aty Afrika: “Zara raha mahazo famatsiam-bola”, hoy ny praiminisitra | NewsMada
Andron’ny indostria aty Afrika: “Zara raha mahazo famatsiam-bola”, hoy ny praiminisitra
Andro natokana ho an’ny fampiroboroboana ny indostria aty Afrika, omaly. Tonga tao amin’ny Carlton nanatrika izany ny Praiminisitra Ntsay Christian.
« Fampiroboroboana ny fifampiankinan’asa aty amin’ny faritra Afrika : ahafahana manafaingana ny fanovana fototra, fironana ho amin’ny indostria ary ny famoahana vokatra fampiasa amin’ny fitsaboana aty Afrika » ny lohahevitra nobanjinina niaraka tamin’ireo mpandraharaha sy mpiara-miombon’antoka.
“Tsy ampy ho an’ny harinkarena ny famokarana fototra ary be loatra ny asa any amin’ny sehatra tsy ara-dalàna”, raha nilaza ny heviny ny praiminisitra. “Misy ny finiavana handraharaha hahazoam-bokatra ao anatin’ny indostria nefa zara raha mahazo famatsiam-bola amin’ireo banky eto an-toerana. Koa tokony hisy paikady mazava eo amin’ny fitantanam-bola eto an-toerana hitsinjovana ny famatsiana ny sehatra tsy miankina ”, hoy ny lehiben’ny governemanta. Tompon’andraikitra amin’izany hevitra naroson’ny praiminisitra izany anefa ny fanjakana.
Ao anatin’izany ny fikajiana sy ny fiarovana ireo harena voajanahary ka jerena manokana ny fari-dranomasina hifehezana ny fitrandrahana an-tsokosoko. Nasian’ny praiminisitra teny ihany koa, nandritra izany, ny mikasika ny fahaiza-mitantana any anivon’ireo indostria.
Nasian-teny koa ny politikam-pampandrosoana, ny ady amin’ny kolikoly, ary ny fampitoviana ny fomba fijery ka tokony hiombon-kevitra amin’izany ny mpisehatra rehetra. « Mba hiakatra ny harinkaren’i Madagasikara, mihoatra no ho izay noheverina tamin’ny fiandohan’ny taona. Vonona mandrakariva ny hanatanteraka izany ny governemanta tarihiko, ary ny fiaraha-miombon’antoka no hanatrarana io fanamby io, izay manan-danja tokoa ho an’ny ho avy, na ao anatin’ny fotoana fohy aza ».
Ahazoam-bokatra fampiasa amin’ny fitsaboana
Marihina fa nandray anjara tamin’ny fahatomombanan’ny adihevitra maneran-tany mikasika ireo fanamby lehibe ho an’ny fampandrosoana an’i Afrika ny ONUDI, sampandraharahan’ny Firenena mikambana miandraikitra ny fampandrosoana ny indostria, ary milatsaka an-tsehatra amin’ny fampandrosoana ny indostria ahazoam-bokatra fampiasa amin’ny fitsaboana eo amin’ireo firenena an-dalam-pandrosoana, indrindra ny any amin’ireo faritra lavitra sy ambanivohitra, ahitan’ny mponina fitsaboana ara-dalàna.
Araka izany, manohana ireo firenena mpikambana ao aminy ity sampana ity, anisan’izany i Madagasikara, momba ireo olana miseho amin’ny fandrindrana ireo fitsipika, sy ny fametrahana tontolom-pihariana manintona ireo mpamatsy vola. Manome lanja ilay tetikasa fampiroboroboana ny indostria mandrakotra an’i Afrika izao fankalazana izao, ary mampiseho taratra ny fifandraisan’ny indostria sy ny fampandrosoana.